इटालियन गोल रक्षक इवान Pelitstsoli
इवान Pelitstsoli - आज काम बिना छ जो एक इटालियन गोल रक्षक हो। यस वर्ष उहाँले 36 वर्ष हुनेछ, त्यसैले त्यहाँ उहाँले नयाँ क्लब फेला बिना आफ्नो क्यारियर समाप्त हुनेछ भन्ने सम्भावना छ। पछिल्लो टोली जसको लागि उहाँले प्ले इवान Pelitstsoli इटालियन भयो "भिसेन्जा"।
इवान Pelitstsoli उहाँले शहर सबैभन्दा ठूलो क्लब "Atalanta" को एक छात्र भयो जहाँ बर्गामो, मा, इटाली नोभेम्बर 18, 1980 जन्म। उहाँले 1998 मा हस्ताक्षर यो क्लब संग छ, 1999 को गर्मी मा एक पेशेवर सम्झौता मिलान अभ्यास बढाउनका "Triestina" भनिने सानो क्लब मा भाडामा गए। त्यहाँ उहाँले तिनीहरूलाई मा लक्ष्य को धेरै conceding छैन, 23 मिलान दुई वर्ष भाडामा खर्च - मात्र 24 निस्सन्देह, उहाँले अन्य क्लब ध्यान आकर्षित गरे, र एक जवान प्रतिभा रूपमा यसको स्थिति उहाँले 30 मिलान प्ले जहाँ "Atalanta", मा सिजन पुष्टि, 31 बल छुट्यो। 2002 को हिउँदमा, "Atalanta" राजधानी गरेको एक जवान गोल रक्षक र आधा लाख यूरो भुक्तानी गर्न तयार थियो जो "रोम", एक प्रस्ताव प्राप्त। त्यसैले इवान Pelitstsoli इटाली बलियो क्लब को एक मा सारियो।
"रोम" को रूपमा प्ले
Pelitstsoli - सजिलै क्लब को दिल मा एक स्थान जित्न सक्ने छैन, र यो उहाँको तथ्याङ्क मा देखाउँछ गोल रक्षक। इटालियन को "रोमियो" मा खर्च भएको छ कि चार वर्ष मा, त्यो 70 लक्ष्य conceding गर्दा मात्र 72 पटक क्षेत्र मा भयो। तर, त्यो क्लब मा सहायक थियो र आफ्नो पहिलो पदक जित्यो - इटालियन सुपर कप। तर 2006 को हिउँदमा यो परिवर्तन को लागि समय थियो - Pelitstsoli "रोम" एक बराबरीको मा छैन, त्यसैले क्लब उहाँलाई दुई लाख यूरो लागि गोल रक्षक पुनर्खरीद गर्ने अधिकार जित्यो जो "रेजिना", मा छ महिना भाडामा दिए।
को "रेजिना" गर्न संक्रमण
छ महिना लागि भाडामा Pelitstsoli आफ्नो सम्झौता बाहिर किनेको थियो त, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो पक्ष देखाए। 2007 को जाडो इटालियन गोल रक्षक गर्ने तीन लाख यूरो भुक्तानी मास्को "लोकोमोटिव", रुचि द्वारा - तर नयाँ क्लब मा, त्यो मात्र छ महिना बिताए। को "रेजिना" इवान लागि बस 41 मिलान रूस मा इटालियन फुटबल परिवर्तन गर्न निर्णय गरेको छ पछि।
तर, हामी Pelitstsoli लामो रूस मा ढिलाइ भन्न सक्दैन। दुई वर्ष, उहाँले बीस खेल खेले र त्यसपछि क्लब गरेको डबल पठाइने। रूस को कप - कि पहिला, त्यो दोस्रो पदक जीत व्यवस्थित। दुर्भाग्यवश, पदक अन्तिम खेलाडीहरू लागि थियो। नक्कली मा छ महिना पछि इवान इटालियन उहाँले 23 मिलान प्ले जहाँ "Albinoleffe", गर्न loaned थियो। को "लोकोमोटिव" मा फिर्ता, उहाँले तीन महिना बिताए र इटाली फिर्ता गरिएका जहाँ डबल, फेरि थियो।
Pelitstsoli "क्यागलियारी" एउटा सम्झौता हस्ताक्षर, तर यसलाई बन्द, यो उहाँको लागि एक स्तर पनि उच्च थियो। वर्ष को लागि, उहाँले एक पटक मात्र क्षेत्र मा देखा, त्यसैले 2011 को गर्मी उहाँले प्राय क्षेत्र बाहिर पहिले नै छ जो "प्याडोभा", सारियो - उहाँले 18 खेल मा क्षेत्र मा देखियो। 2012 मा, इवान दुई मौसम 31 खेल खेलेका जहाँ "पेसकारा", सारियो। कि पछि उहाँले 12 थप मिलान प्ले जहाँ "Virtus", सारियो। 2015 को गर्मी मा Pelitstsoli आफ्नो जागिर गुमाए र अप्रिल 2016 मा "भिसेन्जा" एउटा सम्झौता साइन इन गर्न सक्षम थियो। तर सिजन बाँकी उहाँले एउटा सम्झौता विस्तार प्राप्त भएन एक पटक होइन क्षेत्र प्रवेश गरेको छैन, र फेरि जागिर बिना बाँकी थियो - आज सम्म, उहाँले नयाँ क्लब पाउन सक्षम थियो।
मगोमेद Ozdoev: चढाई तारा
Vincenzo Montella - इटालियन goalscorer
Okolofutbol के हो? गति को घटना को इतिहास र फुटबल तबाही को प्रभाव
मारिन Marko गरेको क्यारियर र सर्बियाली मूलका सफलता जर्मन फुटबल खेलाडी बाटो
Kolbeinn Sigthórsson - आइसल्याण्ड को इतिहास मा सबै भन्दा राम्रो Strikers एक
Sevidov यूरी Alexandrovich: खेल मा जीवनी र उपलब्धिहरू
अन्तस्करणको Pangs: परिभाषा, उदाहरणहरू। पछुतो
निर्णय कार्यक्रम। राउन्ड रोबिन
"वीआईपी-होटल" (Koblevo युक्रेनको): विवरण, सेवा,
पैदल। कस्तो प्रकारको आर्म?
कसरी स्थिर बेरी compote, सल्लाह र व्यञ्जनहरु देखि खाना पकाउनु।
व्यावहारिक सल्लाह: कसरी छडी र्याप गर्न
इटालियन शैली मा भान्सा - फैशन रुझान
यूएसएसआर मा एक दुर्लभ व्यवसाय - डिजाइनर उच्च गति कार
बैंकहरू प्रस्ताव गरेका छन् वरिष्ठ लागि लाभदायक निवेश के हुन्?
मासु संग Khachapuri: ओवन मा नुस्खा
काम विवरण। उत्खनन चालक: जिम्मेवारी अधिकार र जिम्मेवारी